दक्षिण टेनेरिफमा सम्पत्ति बिक्रीको लागि!
दक्षिणी मौसम क्षेत्र टेनेरिफमा वसन्त summerतु गर्मीको मौसम र सूर्यको धेरै घामको साथ बिक्रीको लागि सम्पत्ति!
टेनेरिफको भौगोलिक दक्षिणलाई मौसमको दक्षिणी भागमा भ्रमित नगर्नु महत्त्वपूर्ण छ!
अन्तमा के कुरा साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो मौसम हो! केही व्यक्तिहरू घाम र सुक्खा दक्षिण, अन्य कम घाम, तर धेरै हरिया टेनेरिफको उत्तरी मन पर्छन्।
यहाँ टापुको मौसम नक्शा छ - वास्तवमा यो वर्षाको नक्शा हो। को रातो-सुन्तला रंगले मानिसहरूलाई दक्षिण टेनेराइफ भनेर चिनिने प्रतिनिधित्व गर्दछ (कहिलेकाँही यो थाहा बिना)। साथै तपाईंले त्यो खातामा पनि खाता लिनुपर्नेछ। समुद्रीतट तापमानबाट हरेक १०० मिटर उचाइ १º सेन्टिग्रेड हुँदै जान्छ, तपाईं पहाडमा चढ्दा।
तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यस टापुको भौगोलिक उत्तरमा केही दक्षिणी जलवायु ठाउँहरू छन्! उदाहरणका लागि, सान्ता क्रुज र इगुएस्टे, टेनेरिफको लगभग उत्तर-अधिकांश भाग हो, वास्तवमा वसन्त-ग्रीष्म मौसम वर्षभर हुन्छ।
२ बेडरूम, १ बाथरूम, टेरेस र १ 2० मिटरको बगैचा सहित नयाँ नयाँ अपार्टमेन्ट एल मेदानो, टेनेरिफमा नयाँ परिसरमा ...
Playa De सान जुआनमा अपार्टमेन्ट पुनर्निर्माण गरियो!
प्लेआ डी सान जुआन, गुआया डि इसोरा टेनेरिफ
Playa de San जुआन, टेनेरिफको शान्त भागमा सुपर चमकदार २ शयन कक्ष कोठा! अपार्टमेन्ट दोस्रो तलामा मा स्थित छ ...
लस टेरेसिटास बीच नजिक अपार्टमेन्ट!
बिक्रीको लागि: स्यान एन्ड्रेस, टेनिरफ़मा विशाल अपार्टमेन्ट! शहरको शान्त भागमा अवस्थित प्रसिद्ध लस टेरेसिटास समुद्र तटबाट १ किमि। सुन्दर ...
लस गिगेन्टेस, टेनिरफमा सुन्दर अपार्टमेन्ट! Panoramic दृश्यहरु समुद्र, चट्टानहरु र लस Gigantes को मरीना को। शान्तमा उत्तम स्थान ...
स्टाइलिश हाउस Alcalá मा महासागरबाट m० मी!
अल्काला, गुइआ दे इसोरा टेनेराइफ
बिक्रीका लागि: अल्काला, गुआ डे इसोरा, टेनिरफको चौरमा चार बेडरूम घर! उत्तम स्थान सागरबाट केवल meters० मिटर दूरीमा, केहि चरणहरू ...
आश्चर्यजनक टेरेसको साथ विशेष समुद्रीत अपार्टमेन्ट!
Playa de la Arena, टेनेरिफमा बिक्रीको लागि विशेष पहिलो सागर पंक्ति अपार्टमेन्ट! एक क्रूज जहाज मा बस्न लाग्छ। छत पूर्ण रूपमा छ ...
दृश्य र बगैचाको साथ आरामदायक घर
लास मञ्चस, स्यान्टियागो डेल टेइड टेनिरइफ
बिक्रीका लागि: ल्यान मानससको सान्टिआगो डेल टेडे, टेनिरफको सुन्दर गाउँमा आरामदायक घर! ºº०º समुद्री दृश्य, उपत्यका र ला ...
Playa Arena मा विशाल महासागर फ्रन्ट अपार्टमेन्ट!
प्लेआ डी ला एरिना, स्यान्टियागो डेल टेडे टेनेरिफ
प्लेआ डे ला एरेना, टेनेरिफमा सागरबाट meters० मिटरमा सुन्दर अपार्टमेन्ट! सहरको सबै भन्दा उत्तम ठाउँमा उत्तम स्थान! Panoramic ...
Arona मा पर्यटन लाइसेन्स संग अपार्टमेन्ट!
आरोना, अरुना टेनेरिफ
एरोना, टेनेरिफमा टुरिस्टिक लाइसेन्सको साथ अपार्टमेन्ट बिक्रीको लागि! अपार्टमेन्ट १ बेडरूम, १ बाथरूम, भान्छाकोठा, भित्री आँगन र ...
Alcalá मा घर, टेनिरिफ टुरिस्टिक लाइसेन्स संग !!
Alcala, टेनेरिफमा बिक्रीको लागि! Levels तहमा विशाल घर: भुईं फ्लोर: बैठक कोठा, भान्छा र WC। पहिलो तल्ला: bed शयनकक्ष, १ निजी संग ...
लास गैलेटास, एरोनामा महासागरबाट th० मिटर दूरीमा!
लास ग्यालेटास, आरोना टेनिर
लस ग्यालेटास, आरोना, टेनिरफमा अपार्टमेन्ट बिक्रीको लागि। अद्भुत समुद्री दृश्य! शहरको मध्य भागमा समुद्री तटको नजिक पूर्ण रूपमा! अपराजेय मूल्य! ...
ग्यारेज, पूल र Panoramic महासागर दृश्य संग डुप्लेक्स!
लास क्यालेटिल्लास, क्यान्डेलेरिया टेनिराइफ
लस क्यालेटिलास, क्यान्डेलारियस, टेनिरिफमा बिक्रीको लागि! Panoramic समुद्री दृश्य संग 85m2 निर्मित + 35m छत संग विशाल डुप्लेक्स। यो सँग एक लिफ्ट, गेराज छ ...
अपार्टमेन्ट, कन्डो / टाउनहोम / प Home्क्ति घर, डुप्लेक्स
Playa Paraiso मा Panoramic दृश्यको साथ १० औं तला अपार्टमेन्ट!
Playa Paraiso, Adeje टेनराइफ
Playa Paraíso, Tenerife हार्ड रक क्याफेको अगाडि बिक्रीको लागि सुन्दर अपार्टमेन्ट! अपार्टमेन्ट पारासो डेल सुरमा अवस्थित छ ...
Taucho, Adeje मा दृश्यहरू सहित + घर जग्गा पुनर्स्थापित गर्न!
ताउचो, एडेजे टेनिराइफ
गुइआ डि इसोरा, गुइआ दे इसोरा टेनेराइफ
बिक्रीका लागि: जरालमा सुन्दर फिन्का, गुआ डे इसोरा, टेनिर! Adeje देखि लस Gigantes को तट मा आश्चर्यजनक दृश्य दृश्य संग फिन्का! दुई ...
Taganana क्षेत्र मा सुंदर देश घर, टेनिर! S० वर्ग मीटर 80०० वर्गमिटरमा घर प्लट, एक डबल कोठा, एक बाथरूम, बैठक कोठा, सुसज्जित भान्सा। सम्पत्ति ...
इल पोरिसमा समुद्र तट बीच आर्थिक अपार्टमेंट!
बिक्री को लागी: एल् पोरिस डे अबोना, टेनेरिफ बीचको बीचमा केही मिटर दूरीको सानो आरामदायक अपार्टमेन्ट! अपार्टमेन्ट हो ...
Playa De San Juan मा विशाल अपार्टमेन्ट!
अपार्टमेन्ट एकदमै राम्रो अवस्थामा बिक्रीको लागि छ र प्लेआ डे सान जुआन, गुआया दे इसोरा, टेनिराइफमा धेरै राम्ररी अवस्थित छ। यो पूर्ण रूपमा सुसज्जित छ, ...
लागुना पार्क I मा अपार्टमेन्ट
लास अमेरिका, एडेजे टेनेरिफ
बिक्रीको लागि: लागुना पार्क I को लस अमेरिका (कोस्टा एडेजे), टेनेरिफमा अवस्थित! १ शयनकक्ष, १ बाथरूम, स्वतन्त्र भान्साकोठा, फ्लोर नम्बर २, आन्तरिक ...
Villa Crab Island, लस Gigantes मा!
बिक्रीको लागि: क्र्याब टापु, लस गिग्नेट्स, टेनेरिफमा आफ्नै आँगन, पौंडी पोखरी र ग्यारेजको साथ विशाल घर! घर एक जीवित ...
लस गिगान्ते क्लिफहरूमा आश्चर्यजनक दृश्यहरूका साथ दुई अपार्टमेन्टहरू!
लस गिगेन्टेस क्लिफहरू, स्यान्टियागो डेल टेइड, टेनिरफको शानदार दृश्यहरूका साथ एक शान्त आवासीय सडकको अन्त्यमा पूर्ण रूपमा अवस्थित सम्पत्ति! यी दुई ...
अपार्टमेन्ट, कन्डो / टाउनहोम / पंक्ति गृह, घर
La Arena बीच अगाडि ठ्याक्कै अपार्टमेन्ट अवस्थित छ!
बिक्री को लागी: शहरीकरण "Tagara" मा अपार्टमेन्ट, Playa de la Arena, टेनेरिफ! Sandy समुद्रतट ला एरेनाबाट १०० मिटर भन्दा कम ठाँउ स्थान! सनी टेरेस ...
Playa De सान जुआनमा बीच फ्रन्ट अपार्टमेन्ट!
बिक्रीका लागि: टेनेरिफ, प्लेआ डे सान जुआनको चर्कोमा समुद्रीतटमा विशाल र आधुनिक अपार्टमेन्ट! विशेष स्थान सीधा अगाडि ...
बिग ओशन फ्रन्ट पow्क्ति घर एल मेदानोमा!
बिक्रीका लागि: एल मेदानो सागर अगाडि, टेनिरिफको सुन्दर विशाल सम्पत्ति! ग्यारेजबाट सिधा प्रवेशका साथ निजी गेराजको साथ तीन-मंजिला टाउनहाउस ...
पुन्टा नेग्रा, प्लेआ डी ला एरेनामा विशाल महासागर फ्रन्ट हाउस
महासागरबाट केवल १० मिटरमा विशाल पृथक घर। टेनेरिफमा सब भन्दा राम्रो छिमेकहरू। समुदाय पोखरी निजी ग्यारेज बाट सूर्य ...
बिक्रीका लागि: पाम-मार्, टेनेरिफमा शहरीकरण "फ्लेमिंगो" मा अपार्टमेन्ट! समुद्रबाट cent the० मिटर मात्र धेरै केन्द्रित स्थान। शहर मा Panoramic दृश्यहरु ...
एल् मेडानोमा बीच फ्रन्ट अपार्टमेन्ट!
बिक्रीका लागि: एल् मेडानो, टेनिरफमा ठूलो समुद्र तट अगाडि सम्पत्ति! पहिलो समुद्री प row्क्ति! आश्चर्यजनक दृश्यहरू! अपार्टमेंट सज्जित बेचिन्छ, र एक पार्किंग ...
La Teitaa बीच नजिक समुद्री दृश्य गार्डन अपार्टमेंट!
बिक्रीका लागि: एल् मेडानो, टेनिरफमा बगैंचा र समुद्री दृश्यहरूको साथ ठूलो अपार्टमेन्ट! २ शयनकक्ष अपार्टमेन्ट (१० मीटर + m मीटर) + १ कोठा विन्डो बिना ...
सान इसिद्रोमा राम्रो अपार्टमेन्ट!
सान ईसिड्रो, ग्रानाडिला डे अबोना टेनिरइफ
बिक्रीका लागि: सान इसिड्रो, टेनेरिफमा राम्रो तरिकाले अवस्थित एभेनिडा सान्ता क्रुजको बीचमा। पूर्ण भान्छा राम्रो स्थितिमा, एक बाथरूम, ...
महासागरबाट अपार्टमेन्ट १०० मीटर!
पोर्टो डे स्यान्टियागो, स्यान्टियागो डेल टेडे टेनिरिफ
बिक्रीको लागि: समुद्र किनारबाट १०० मिटर पोर्टो स्यान्टियागोमा अपार्टमेन्ट। यो पहिलो तलामा अवस्थित अपार्टमेन्ट हो जहाँ एकमा ...
विशाल समुद्र तट फ्रन्ट अपार्टमेन्ट २१215 वर्गमीटर!
रडाजुल, क्यान्डेलेरिया टेनेरिफ
बिक्रीका लागि: Radazul, टेनेरिफ मा विशाल र लक्जरी समुद्र तट सामने अपार्टमेंट! सान्ता क्रुजको राजधानी शहर नजिकै सुन्दर रिसोर्ट क्षेत्र। आश्चर्यजनक पानोरामिक ...
बीच फ्रन्ट अपार्टमेन्ट - Playa Chica
बिक्रीको लागि: Playa Chica, टेनेरिफको नजिक सागर अगाडि अपार्टमेन्ट! पोर्टो डे स्यान्टियागोमा पुरानो शहरको केन्द्रमा अवस्थित! लाई अचम्मको दृश्य ...
Villas Canarias, Adeje मा नवीकरण गरिएको अपार्टमेन्ट
कोस्टा अडेजे, टेनेरिफमा बिक्रीको लागि: भर्खरै "Grans Sur" शपिंग सेन्टर नजिकै "Villas Canarias" मा अपार्टमेन्ट मर्मत गरियो। कम्प्लेक्स भित्र धेरै राम्रो स्थान। कम ...
बीचफ्रन्ट गुफा हाउस, दक्षिण कोस्ट टेनेरिफ
क्यान्डेलारिया, क्यांडेलेरिया टेनेराइफ
Playa Viuda, Candelaria, साउथ टेनेरिफमा बिक्रीको लागि सुन्दर बीचफ्रेन्ट गुफा घर। आराम गर्न उत्तम शान्त ठाउँ। TF-1 राजमार्गमा धेरै राम्रो पहुँच ...
कन्डो / टाउनहोम / पंक्ति गृह, डुप्लेक्स, घर
Candelaria मा समुद्र तटबाट meters० मिटर अपार्टमेन्ट !! धेरै राम्रो स्थान र राम्रोसँग राखिएको जटिल! एक सुविधायुक्त वातावरणमा। लिफ्टको साथ सातौं तला टेरेस पौंडी ...
सान यूजेनियो, एडेजे टेनिराइफ
कोस्टाडेनिया पार्क जटिलमा कोस्टा अडेजे, स्यान यूजेनियो, टोरभिस्कस अल्टो क्षेत्रमा बिक्रीको लागि अपार्टमेन्ट। अपार्टमेन्ट पूर्ण रूपमा बेचिन्छ। बैठक कोठा, १ शयनकक्ष, ...
ओशन फ्रन्ट हाउस + V भ्याकेशनल अपार्टमेन्टहरू!
महासागरमा बिक्रीको लागि! Almaciga अनागा को ग्रामीण पार्क! चार छुट्टी घर + भवन स्वतन्त्र घरको साथ हाल भाडाको भाडामा भाडामा लिएर निर्माण गर्दै ...
अपार्टमेन्ट, वाणिज्यिक, कन्ट्री हाउस, घर, लगानी
बिक्रीका लागि: अर्ध-पृथक घर पूर्ण रूपमा मर्मत गरियो। यो पाम मार, आरोनाको आवासीय क्षेत्रमा अवस्थित छ। यसमा large ठूला बेडरूमहरू छन्, एउटा ...
ला एरिना बीचबाट ठूलो--मंजिला टाउनहाउस m०० मी !!
Playa de la Arena, टेनेरिफमा बिक्रीको लागि विशाल4मंजिला टाउनहाउस! उत्तम स्थान सागरबाट १ 150० मिटर र from०० मिटर ...
"ओलिभिया सूर्यास्त" मा कुनामा समुद्री दृश्य अपार्टमेन्ट
प्लेआ डे ला एरेना, टेनेरिफमा बिक्रीको लागि आधुनिक अपार्टमेन्ट। लस गिगान्टेस क्षेत्र। समुद्री दृश्यको साथ ठूला कुना टेरेस। ठूलो पौडी खेल्नको साथ आधुनिक जटिल ...
आश्चर्यजनक दृश्यहरूको साथ बिग ओशनफ्रन्ट हाउस !!
बिक्रीका लागि: क्यानरी टापु, क्यानरी टापु, स्पेनको टेनेरिफको दक्षिणी भागमा, एल पोरिसको शान्त समुद्री तटमा विशेष समुद्रीतट सम्पत्ती! मा शीर्ष नाम "Porís" ...
हाउस In० मीटरको महासागरबाट अल्कालामा !!
बिक्रीका लागि: अल्काला, गुइआ दे इसौरा, टेनिराफमा ठूलो--मंजिला सम्पत्ति! Panoramic दृश्यहरु को साथ महासागरबाट मात्र meters० मिटर मा उत्तम स्थान !! Ter छतहरू, ...
बिक्रीका लागि: लस गिगेन्ट्स, टेनेरिफमा लक्जरी कम्प्लेक्समा सुन्दर अपार्टमेन्ट! दुई ठूला पौंडी पोखरी र जाकुजिस! महासागर दृश्यको साथ विशाल छत! एयर ...
बिक्रीका लागि: शहर लस गिगान्ट्स, टेनेरिफमा विशाल अपार्टमेन्ट! शहरको केन्द्रमा सिधा उत्तम स्थान, केवल केही कदम मात्र टाढाबाट ...
बिक्रीका लागि: टेनेरीफ, लस गिगान्ट्समा मनोरम महासागर दृश्यहरूका साथ उत्कृष्ट सम्पत्ति! अपार्टमेन्ट केवल एक सीधा छिमेकीको साथ अन्तिम फ्लोरमा अवस्थित छ ....
पोखरीको साथ ओसनफ्रन्ट अपार्टमेन्ट
Playa de la Arena, टेनेराइफमा बिक्रीको लागि भर्खरै नविकरण गरिएको अपार्टमेन्ट! टाइल छतमा महासागर दृश्य भूमध्यसागरको भावना दिन्छ। पूर्ण रूपमा सुसज्जित र सुसज्जित। पौंडी ...
Playa De La Arena नजिक फिन्का-भिल्ला
प्लेआ डी ला एरेना, गुइआ दे इसोरा
Playa de la Arena, लस Gigantes, टेनेरिफको नजिक Cueva de Polvo मा ठूलो फिन्का बिक्रीको लागि। उत्तम स्थान। १,1,5 हेक्टर जमिन भन्दा बढी ...
पोर्टो स्यान्टियागोमा समुद्री दृश्यको साथ अपार्टमेन्ट!
बिक्रीको लागि: टेनेराइफको पोर्टो डे स्यान्टियागोमा मनोरम दृश्यको साथ विशाल अपार्टमेन्ट! दुई शयनकक्ष र ठूलो बैठक कोठा! Panoramic समुद्री संग आश्चर्यजनक घमाइलो टेरेस ...
बीचबाट उत्कृष्ट हाउस १ 150० मिटर!
बिक्रीका लागि: पुरानो शहर पोर्टो डे स्यान्टियागो, टेनेरिफमा Panoramic समुद्री दृश्यको साथ उत्कृष्ट विशाल सम्पत्ति! उत्तम स्थान केवल १ica० मिटर "Chica" समुद्री किनारबाट र ...
राम्रो कम्प्याक्ट बीच बीच अपार्टमेन्ट + पूल!
बिक्रीका लागि: प्लेआ डे ला एरेना, टेनेरिफमा धेरै विशेष सम्पत्ति! धेरै राम्रो र आरामदायक कम्प्याक्ट अपार्टमेन्ट ला एरेनाबाट केवल १०० मिटरमा ...
पोर्टो स्यान्टियागोमा ठूलो अपार्टमेन्ट !!
बिक्रीका लागि: प्यूर्टो स्यान्टियागो, टेनेरिफमा अपार्टमेन्ट! पोर्टो स्यान्टियागोको बिचमा राम्रो अपार्टमेन्ट। विशाल र कार्यात्मक !! बच्चाहरु संग परिवार को लागी आदर्श। खेल मैदानको नजिक, ...
विशेष स्थानमा १००% नविकरण पेन्टहाउस!
बिक्रीका लागि: Playa de la Arena, Tenerife मा विशेष सम्पत्ति! यो माथिल्लो कुनामा पेन्टहाउस अपार्टमेन्ट हो विशेष रूपमा बिनाको किनारमा अवस्थित ...
लक्जरी अपार्टमेंट + छानामा अनन्त पोखरी !!
बिक्रीका लागि: टेनेरिफको प्लेआ डे ला एरिना, समुद्री दृश्य र समुदाय पोखरीको साथ लक्जरी अपार्टमेंट! दुई ठूला छतहरूसहित भर्खरै निर्माण गरिएको अपार्टमेन्ट ...
बिक्रीको लागि: सूर्य एन्ड्रेस, टेनेरिफको केन्द्रमा आरामदायक घर! शहरको सब भन्दा राम्रो सडक मध्ये एकमा सही स्थान। मात्र १ 150० ...
ला एरेना बीच नजिकै अपार्टमेन्ट!
बिक्रीका लागि: ला एरेना समुद्र तट, टेनेरिफको छेउछाउ प्रशस्त कुना अपार्टमेन्ट! समुद्र तट पैदल बाट केहि मिनेट टाढा छ! शयनकक्ष विन्डोबाट समुद्री दृश्यहरू ...
डुप्लेक्स + समुद्र तटबाट २०० मीटर ग्यारेज लक गर्नुहोस्!
ताजाओ, एरिको टेनेरिफ
बिक्रीका लागि: स्यान मिगुएल डे ताजाओ, टेनिरफमा अचम्मको सम्पत्ति! समुद्री तटबाट केवल २०० मिटर, माछा मार्ने पोर्ट र माथिको उत्तम माछा रेस्टुरेन्ट ...
अपार्टमेन्ट पार्कि Parking १०० मिटर महासागरबाट!
बिक्रीको लागि: अपार्टमेन्ट + भूमिगत ग्यारेजमा पार्किंग ठाउँ, प्लेआ डे ला एरेना, टेनिरफ! समुद्रबाट केवल १०० मिटर दूरी! दुई मिनेट हिड्दै ...
पोर्टो डे स्यान्टियागोमा आँगनको साथ केन्द्रित अपार्टमेन्ट!
बिक्रीको लागि: टेनेरिफको पोर्टो डे स्यान्टियागोको बीचमा सुन्दर अपार्टमेन्ट! Lidl र नजिक एक राम्रो भवन को दोस्रो तला मा स्थित छ ...
लस गिगान्ट्समा अनन्य स्पेसिअस पेन्टहाउस
लस गिगान्टेस, स्यान्टियागो डेल टेडे
लस गिगान्टेस, टेनेरिफमा बिक्रीको लागि विशेष पेन्टहाउस अपार्टमेन्ट। महासागरमा शानदार Panoramic दृश्य, लस Gigantes चट्टानहरु र माउंट Teide! धेरै निजी र ...
कोस्टा डेल सिलेन्सियोमा ठूलो टेरेस अपार्टमेन्ट!
कोस्टा डेल सिलेन्सिओ, आरोना टेनेरिफ
बिक्रीका लागि: टेनेरिफा कोस्टा डेल सिलेन्सिओमा विशाल दुई बेडरूम अपार्टमेन्ट! टेनिस कोर्टहरू, पौंडी पोखरी र राम्रो संग शहर मा राम्रो समुदाय ...
कोस्टा डेल सिलेन्सियो
पोर्टो डे स्यान्टियागोमा आधुनिक र विशाल अपार्टमेन्ट!
बिक्रीका लागि: टेरेनिफको पोर्टो डे स्यान्टियागोको बीचमा विशाल र आधुनिक सम्पत्ती! प्लाजा, बार, पसल, सुपरमार्केटबाट केहि चरणहरू टाढा ...
गुइआ दे इसोरामा समुद्र दृश्यहरूका साथ सुन्दर घर!
बिक्रीका लागि: टेनेरिफको गुआया डि इसोराको बिचमा विशाल र सुन्दर पंक्ति घर !! शान्त सडकमा उत्तम स्थान केहि चरणहरू ...
दुई घरहरू + एक जग्गामा आँगन!
अर्गुवायो, गुआ डे इसोरा टेनेराइफ
टेन्टेरिफको स्यान्टियागो डेल टेइड नजिकै अर्गुवायोमा एउटा घर रहेको दुई घरहरू। स्थान अचम्मको छ! लसबाट १ 15 मिनेट टाढा शान्त गाउँ ...
बीचफ्रन्ट अपार्टमेन्ट + क्यारेजमा गेराज !!!
बिक्रीको लागि: बन्दरगाहबाट केवल meters० मिटरको दूरीमा र क्यान्डेलरिया, टेनेरिफको समुद्र तटमा आरामदायक अपार्टमेन्ट! एउटा मध्ये धेरै राम्रो स्थान र मूल्य ...
लस गिगन्तेज नजिक सुन्दर विला-फिन्का!
फिन्का बिक्रीको लागि ला Caldera मा minutes मिनेटमा लस Gignates र Playa डे ला एरेना, टेनेरिफ बाट। पोखरीको साथ आधुनिक घर र ...
टाउन हाउस स्यान्टियागो डेल टेडमा नविकरण गर्न !!
बिक्रीका लागि: स्यान्टियागो डेल टेडे, टेनेरिफमा आँगनको साथ शहरको घर पुनर्निर्माण गर्नुहोस्! केन्द्रिय स्थान आईडी मुख्य सडकको बीचमा ...
Tamaimo मा ग्यारेज संग लक्जरी अपार्टमेंट!
Tamaimo, टेनेरिफ मा विशाल लक्जरी अपार्टमेंट बिक्री को लागी! छतबाट राम्रा दृश्यहरू। भूमिगत ग्यारेजमा निजी पार्किंग ठाउँ। लिफ्टहरू। थप भण्डारण कोठा ...
लस जिगान्तेसबाट तामाइमोको बाटोमा ला Caldera मा समुद्री दृश्यको साथ बिक्रीको लागि ठूलो छुट्याइएको भिला। शान्त र सुन्दर ठाउँ बिनाको ...
डुप्लेक्स अपार्टमेन्ट ओशन ओसनका साथ
तातो पोखरीको साथ जटिल निर्माणमा समुद्र र लस गिगान्ट्स चट्टानहरूको दृश्यको साथ बिक्रीको लागि सुन्दर अपार्टमेन्ट। अपार्टमेन्ट २ बेडरूम, ...
घर वाइनरी सहित + Taucho मा बिक्री को लागि जग्गा !!
बिक्रीका लागि: ताउचो, टेनिरफमा सुन्दर सम्पत्ति! शान्तिमय जीवन या व्यवसायिक भाडाको लागि उत्तम ठाउँ! घरलाई दुई अलगमा रूपान्तरण गर्ने सम्भाव्यता ...
एरिकोमा आँगनको साथ सुन्दर घर !!
बिक्रीका लागि: एरिको भिएजो, टेनेरिफमा विशाल सम्पत्ति! सुन्दर ठाउँमा सुन्दर ठूलो घर! Bed शयनकक्ष, २ भान्छा, २ बस्ने कोठा, bath बाथरूम, ...
पोर्टो डे स्यान्टियागोको केन्द्रमा विशाल अपार्टमेन्ट!
बिक्रीका लागि: टेनेरिफको पोर्टो डे स्यान्टियागोको बीचमा अपार्टमेन्ट! Bed शयनकक्ष र ठूलो भान्ते कोठाको भान्छा। Panoramic कुना टेरेस। निजी ...
प्लाजा डे तामाइमो नजिक समुद्री दृश्यको साथ शहरी निर्माण प्लट !!
बिक्रीका लागि: प्लाजा डे तामाइमो, टेनेरिफ नजिकै ठूलो सहर Tamaimo को ब्यारेन्को द्वारा सीमित समुद्री दृश्यको साथ उत्तम स्थान। कसैले निर्माण गर्दैन ...
Tamaimo मा समुद्री दृश्यको साथ शहरी निर्माण प्लट !!
बिक्रीका लागि: s०० वर्गमीटर Tamaimo, टेनेरिफ मा सम्पत्ति! Panoramic समुद्री र हिमाली दृश्यको साथ १००% सहरी निर्माण प्लट! शान्त भागमा सही स्थान ...
मुख्य रोडमा वाणिज्यिक परिसरहरू तामाइमोलाई छेक्ने!
बिक्रीका लागि: तेदेईको मुख्य सडकमा तामाईमो शहरमा विशाल वाणिज्य परिसर। अफिसको अगाडि बस स्टप ....
बीचबाट पूल m०० मिटरको साथ अपार्टमेन्ट!
बिक्रीका लागि: लास क्यालेटिलास, टेनेरिफमा बलौटे समुद्र तटबाट केवल meters०० मिटर जति ठूलो सम्पत्ती!
लस Caletillas मा समुद्र तट बाट 300m पूल संग अपार्टमेंट!
Granadilla De Abona मा प्रशस्त घर!
बिक्रीका लागि: टेनेरिफमा Granadilla de Abona मा भर्खरै पुनर्स्थापित घर! अधिक फ्लोरहरू निर्माण गर्न सम्भाव्यता! प्रशस्त आन्तरिक आँगन! घर बस्नका लागि तयार छ!
एल पोरिसमा विशाल समुद्री किनार अपार्टमेन्ट !!
बिक्रीका लागि: एल् पोरिस, टेनेरिफमा विशाल समुद्रीतट सम्पत्ती! पानीबाट १ 150० मिटर लामो समुद्री दृश्यहरूको साथ अपार्टमेन्ट! स्विंगको साथ राम्रोसँग राखिएको जटिल ...
पुरानो औपनिवेशिक घर अरुनाको केन्द्रमा पुनर्स्थापना गर्न !!
बिक्रीको लागि: पुरानो शहर Arona, टेनेरिफको बीचमा पुनर्स्थापित गर्न पुरानो औपनिवेशिक घर! को एक शांत भाग मा धेरै राम्रो स्थान ...
औपनिवेशिक घर, घर
ठूलो औपनिवेशिक घर + एरोनाको केन्द्रमा जग्गा !!
बिक्रीका लागि: पुरानो शहर अरोना, टेनेरिफको केन्द्रमा पुनर्स्थापित गर्न ठूलो औपनिवेशिक घर! को एक शांत भाग मा धेरै राम्रो स्थान ...
Playa De San Juan नजिक नयाँ विशाल अपार्टमेन्ट !!
अगुआ दुल्से, गुआया डि इसोरा टेनेराइफ
बिक्रीका लागि: टेनेरिफको प्लेआ डे सान जुआनको समुद्र तटबाट केवल minutes मिनेट टाढा विस्तृत नयाँ सम्पत्ती! शान्त आवासीयको उत्तम स्थान ...
ठूलो टेरेस अपार्टमेन्ट + ला पर्लामा पार्किंग !!
बिक्रीका लागि: प्लेन डे ला एरेना, टेनेरिफमा ठूलो गोलाकार टेरास सहित विशाल सम्पत्ति! एकदम Playa de la Arena को बीचमा अवस्थित ...
लस अब्रिगोसमा अपार्टमेन्ट महासागरबाट १m० मी !!
लस अब्रिगोस, ग्रानाडिला डे अबोना टेनेरिफ
लस अब्रिगोस, Granadilla de Abona, टेनेरिफ मा सुन्दर अपार्टमेंट बिक्री को लागी! सम्पत्ती एक शान्त आवासीय सडकमा अवस्थित छ केवल १ 150० मिटरको दूरीमा ...
अपार्टमेन्ट पेरिटिटोमा महासागरबाट Me० मीटर !!
प्युर्टिटो डे गुइमर, गुइमर टेनिराइफ
तीन बेडरूम अपार्टमेन्ट बिक्रीको लागि प्युरिटो डे गुइमार, टेनेरिफमा! विशाल अपार्टमेन्ट समुद्रबाट केवल meters० मिटर र समुद्री तटबाट meters०० मिटर!